ozo | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Ihe nrịba nke 10 n'oge mgbaàmà
Dementia abụghị naanị nchefu ihe. Yabụ kedu ka isi mata ọrịa a n’oge? Gịnịkwa bụ ọrịa ụfụ? N'ezie, nke a abụghịdị ọrịa. Anyị nwere ike ikwu na nke a…
Isnye bụ Oscar, ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme nke osisi fig ama ama
Oscar ama ama ama ama ama ama nwere akụkọ mgbe ochie na asịrị. N'iru gi bu akuko ihe omuma di iche na ihe itunanya banyere onyinye a ma ama. Nkịta nke izizi nwere ike inweta ihe nrite.
13 nkọwa ị nwere ike ọ gaghị ama maka ndị ìsì
Onye ọ bụla ma ọ dịkarịa ala otu oge na ndụ ya anọwo n'ọnọdụ ọnọdụ majeure ike metụtara ọnwụ nke ịhụ ụzọ ruo nwa oge. Nke a bụ n'ihi ihe ndị mejupụtara na ikike ọkụ. Chegodi oke ikuku mere na mpaghara gi…
Enwere ezigbo moby dick?
N’ezie, nnukwu, ọbara ọgbụgba na oke ọcha Wby Moby Dick sitere na akwụkwọ akụkọ Herman Melville bụ akụkọ ifo nke onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị American ikpeazụ. Agbanyeghị, dị ka oge niile, eziokwu ghọrọ ihe mkpali maka akụkọ ifo. Akụkọ ifo ma ọ bụ ...
Gini mere coffee nwere ike ime ka iwe iwe?
Ndị mmadụ na-ekwukarị gbasara etu ha enweghị ike ibi n’enweghị iko kọfị. Agbanyeghị, o nweghị onye na-ekwu na otu iko kọfị kpọtere na ọ bụghị naanị gị…
Ọ bụ eziokwu na ọ dịghị ihe ọ bụla dị ndụ dị ka nke ahụ?
Uche mmadu nwere ike imekorita ihe obula, ma obughi na odighi ihe ojoo. Onweghi onye nwere ike ibi ndu ghaghaasighi, nke ogbaaghara. Ee, ime ụlọ ruru unyi na-eto eto nwere ike ile anya mara mma…
Onye mbibi nke Amerịka Ọhụrụ: Ike na Adịghị Ike
Ihe na 05.09.2019
Ọ dị ka igwe igwe na ihe dị egwu karịa iyi egwu, mana General Dynamics na-ebu ụgbọ mmiri bụ ndị mepụtara Bath Iron Work na Maine, nke a bụ ọrụ ebube nke teknụzụ, kwuo ...
6 creepy mmụọ ụgbọ mmiri akụkọ
Ihe na 22.08.2019
Onye ọ bụla anụla maka ụgbọ mmiri a na-akpọ Flying Dutchman, ụgbọ mmiri mmụọ ama ama na ụwa niile. Agbanyeghị, ọ tere aka na otu. Mọ nke ụgbọ mmiri kwọbatara bụ isiokwu a ma ama, ...
Umu kachasị ogologo ụwa: ihe ọhụrụ ndekọ Guinness
Ihe na 16.08.2019
Otu nwoke si India banye na Guinness Book of Records, ebe ọ na-eme, n'eziokwu, ọ nweghị ihe ọ bụla. O righị ọtụtụ nnukwu nkịta na-ekpo ọkụ, esighị n’elu ụlọ ụlọ ahụ wụpụ. Ihe niile ọ ...
Esi zụlite nwa nwere obi ike: Atụmatụ 12 maka ndị nne na nna
Ihe na 07.08.2019
Ntukwasi obi bu onyinye kachasi nma nke nne na nna puru inye umu ha. Ya mere, ekwesịrị ị attentiona ntị na okwu a. Dabere na ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ, obi ike zuru ezu…
Nso ke Beethoven akanam ke ini enye okopde
Ihe na 02.08.2019
A mụrụ ya 245 afọ gara aga, mana ọdachi nke ịnụ ntị ka na-amasị ndị hụrụ egwu n'anya. Ihe nzuzo banyere ọmụmụ Beethoven Ọbụna mgbe ọtụtụ narị afọ gasịrị, a ka nwere nnukwu nzuzo banyere ndụ Ludwig…
Ihe ngosi 6 site na ihe nkiri vidio na ndị na-eme ihe ọṅụṅụ na-egbu egbu
Ihe na 27.07.2019
Ọ bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya ikwere na ọ bụrụ na onye na-eme ihe nkiri na-eme onye ọ drunkụ drunkụ na-egbu egbu, ọ pụtara na ọ nwere mmachi n'ezie tupu mmadụ abụọ ahụ. Ọrụ onye ọka ihe nkiri kwenyere onye na-ekiri ya na maniac na-agba ọbara pụtara n'ihu ha, ma ọ bụ…
10 dị ịtụnanya gbasara ihe dolphins
Ihe na 18.07.2019
Ma okenye ma ụmụaka hụrụ dolphins n'anya. Anụmanụ ndị a yiri ka hà nwere ọgụgụ isi nke ukwuu, iso ha na-ekwurịta okwu ọbụna nwere ọgwụgwọ ọgwụgwọ! Mụta banyere ha ihe eziokwu iri na-atọ ụtọ. E nwere ihe karịrị iri atọ ụdị dolphins dolphins ...
Nwa akwukwo mama 10. Gụ ya na nwa gị!
Ihe na 16.07.2019
Nke a bụ akwụkwọ ozi nke nne ọ bụla ga-achọ ide, nke na-enweghị ike ịkọwa eziokwu ụfọdụ dị ilu n'okwu. Ma ọ dị ha mkpa ka ha mee oge ụfọdụ, ka mma karịa oge ọ bụla. Gịnị mere o ji malite? Taa ...
4 bụ ihe ịrịba ama nke ndị ihu abụọ ndị dị gị mma
Ihe na 08.07.2019
Mgbe ụfọdụ, anyị na-akọwahie ndị gbara anyị gburugburu ma gbalịsie ike ilekọta ha, ọ bụ ezie na anyị agaghị enweta otu ihe ahụ na nloghachi. Enwere ikpe mgbe anyị na-ahụ atụmatụ ndị ahụ ...
Ngwa ngwa ngwa nyere gị aka ịtụle ihe na iPhone 6s
Ihe na 01.07.2019
Apple emepewo 3D Touch technology maka inwekwu mkparịta ụka ekwentị na onye nwe ya. Otú ọ dị, ngosi nke iPhone 6s na iPhone 6s Plus ekwughị okwu gbasara ...
Kedu esi ewepụ ihe nkwụnye si na ụgbọ ala ahụ?
Ihe na 26.06.2019
Ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala na-etinye ihe nkwụnye ụkwụ na ụgbọala ha nke nwere ike ịkọ ihe ọ bụla. Mgbe ụfọdụ, ndị a na-abịa kpọmkwem site na emeputa, ma na ihe ọ bụla, ị nwere ike ịmasị ihe dị ka nke ahụ ...
25 ihe omuma banyere eziokwu
Ihe na 22.06.2019
Zebra bu otu n'ime umu mmadu mara mma nke bi n'Afrika. Ndị mmadụ maara ọnyá ha ndị a ma ama na ahụ ha, ha enweghị ike idozi nsogbu ahụ n'ụzọ ọ bụla: ha dị ọcha na ụcha ojii ma ọ bụ otu ihe ahụ ...
Mwepu nke "Antonov", ma ọ bụ njedebe nke ụlọ ọrụ ụgbọ elu Ukraine
Ihe na 21.06.2019
Iwu ochichi nke sitere na January 26 kwadoro ka mmiri nke Antonov ụgbọelu na-eche nche. Akwụkwọ a mere ka ọtụtụ ndị bi na Ukraine na ebe nile Soviet gbasaa, n'agbanyeghị ọtụtụ nkọwa na ...
Gini mere umuntakiri umuaka di iche: 5 ihe kpatara ya
Ihe na 20.06.2019
Enwere otutu echiche nke na-enweghị ngwụcha banyere ihe mere ụmụ nwanyị onwe ha, ndị nwere onwe ha na ndị mara mma na-ejikarị enwekarị. Dị ka ihe kachasị na ndụ anyị, nke a abughi azịza na-enweghị isi. Ọtụtụ mgbe ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,525.